အလီ ဘာ ဘာ ၏ ပြည်ပ လက်လီ အမှာစာ များသည် ၂၀ ၂၂ ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ်တွင် ၃၄% တိုးတက် ခဲ့သည် – Pandaily
အလီ ဘာ ဘာ ၏ ပြည်ပ လက်လီ အမှာစာ များသည် ၂၀ ၂၂ ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ်တွင် ၃၄% တိုးတက် ခဲ့သည်
May 27, 2022, 18:04ညနေ 2022/05/29 21:55:45 Pandaily
တရုတ် အင်တာနက် နှင့် အီး ကော မတ် စ် ကုမ္ပဏီကြီး Alibaba Group Holdings Limitedမတ်လ ၃၁ ရက်ကုန်ဆုံး သည့် ၂၀ ၂၂ ဘဏ္ဍာ နှစ်နှင့် စတုတ္ထ သုံးလပတ် အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ တရားဝင် အစီရင်ခံစာကို ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်. ယခု ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အလီ ဘာ ဘာ ၏ ၀င္ေငြ သည္ ယမန္ ႏွစ္ ကထက္ ၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ ခဲ့ၿပီး ယြမ္ ၈ ၅၃ ဒသမ ၀ ၆၂ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ၁၂၇ ဒသမ ၀ ၂ ဘီလ်ံ) ႏွင့္ အသား တင္ အျမတ္ ေငြ (Non-General Accounting Standards) မွာ ယြမ္ ၁၃၆ ဒသမ ၃ ၈၈ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ၂၀ ဒသမ ၃ ၀၈ ဘီလ်ံ) ျဖစ္ၿပီး ယြမ္ တစ္ႏွစ္ ထက္ တစ္ႏွစ္ က်ဆင္း မႈ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိခဲ့သည္။
ဘဏ္ report ာရေး အစီရင်ခံစာအရ Alibaba Group ၏နှစ် စဉ် တက်ကြွသော စားသုံးသူ များသည် ကာလအတွင်း ၁. ၃၁ ဘီလီယံ အထိရောက်ရှိ ခဲ့ပြီး နှစ်စဉ် အသားတင် တိုးတက်မှု ၁၇ ၇ သန်း ရှိသည်။ ၎င်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံတွင် စားသုံးသူ ၁၁၃ သန်း တိုးလာ ခြင်းနှင့် ပြည်ပ တွင် စားသုံးသူ ၆၄ သန်း ၏အ သားတင် တိုးတက်မှု တို့ပါဝင်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Alibaba Group ၏ ရေခြားမြေခြား ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေး ကဏ္ gradually သည်တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွား လာခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာ လက်လီ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ၏စုစုပေါင်း အမှာစာ မှာ တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၃၄% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ဒေသဆိုင်ရာ e-commerce ပလက် ဖော င်း၏ ပေါ်လွင် ချက် များမှာ-Lazada ၏ နှစ်စဉ် အမှာစာ ပမာဏသည် ၆၀% တိုးတက်ခဲ့ပြီး ဒေသတွင်း မဟာဗျူဟာ သည် ရလဒ်ကောင်း များရရှိခဲ့သည်။ တူရကီ နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်း ရှိ e-commerce ပလက်ဖောင်း Trendyol သည် နှစ်စဉ် အမှာစာ ၆၈% တိုးတက်ခဲ့သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လက်ကား ရောင်းဝယ် မှုအရ နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မှု အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က အလီ ဘာ ဘာ ၏အွန်လိုင်း အရောင်းအ ၀ ယ် ပမာဏသည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၄၆% တိုးတက်ခဲ့သည်။ Alibaba Group ၏ အစောဆုံး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုအနေဖြင့် Alibaba .com သည် တိုးတက်မှု အသစ်တစ်ခု ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဒစ်ဂျစ်တယ် နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မှု ၀ န်ဆောင်မှု စွမ်းရည် များကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များပိုမို ဖွင့်လှစ် ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဒစ်ဂျစ်တယ် နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မှု အပြည့်အဝ ချိတ်ဆက်ထားသော ၀ န်ဆောင်မှု ပလက်ဖောင်း သို့အသွင်ပြောင်း ခြင်းကို အရှိန်မြှင့် ခဲ့ပြီး တန်ဖိုး မြှင့် ၀ န်ဆောင်မှု ၀ င်ငွေ သိသိသာသာတိုးတက်လာ ခဲ့ပြီး ၃၈% တိုးတက်ခဲ့သည်။
နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ကဏ္ တွင် လူသစ် သည် နိုင်ငံတကာ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး စွမ်းဆောင်ရည် ကိုစဉ်ဆက်မပြတ် အားဖြည့် ရန်အတွက် Global AliExpress, Lazada နှင့် Trendyol စသည့် နိုင်ငံရပ်ခြား စားသုံးသူ စျေးကွက် များ၌ တည်ထောင် ထားသော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို မှီခို သည်။ ၎င်းသည် အဆုံး မှ အဆုံး သို့ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး & nbsp ကိုလည်း အဆင့်မြှင့် တင်ခဲ့သည်။ အီလက်ထရောနစ် အချက်အချာ များ၊ လိုင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အမျိုးအစား ခွဲ ခြင်း စင်တာ များနှင့် နောက်ဆုံး မိုင် ကွန်ယက် များအပါအ ၀ င် ကွန်ယက် များ။ လူသစ် သည် ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ်တွင် နေ့စဉ် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် နှင့် နိုင်ငံတကာ အထုပ် ၄. ၅ သန်းကျော် ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် cloud computing သည် Alibaba Group အတွက် နောက်ထပ် တိုးတက်မှု အချက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ Aliyun ၏ EBITA (“ အတိုး ၊ အခွ န်၊ တန်ဖိုး လျော့ ခြင်းနှင့် ငွေချေး ခြင်း မတိုင်မီ ဝင်ငွေ” ) မှ အမြတ်အစွန်း သည် ၂၀၂၁ ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ်တွင် ၂. ၂ ၅၁ ဘီလီယံ ယွမ် (ဒေါ်လာ ၃ ၃၅. ၂ သန်း) မှ ၂၀ ၂၂ ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ်တွင် ၁. ၁၄၆ ဘီလီယံ ယွမ် (ဒေါ်လာ ၁၇၀. ၆ သန်း) မှ သိသိသာသာ တိုးတက်ခဲ့သည်။
၂၀ ၂၂ ခုနှစ်မတ်လ ၃၁ ရက်အထိ Alicloud သည် ကမ္ဘာအနှံ့ ရှိ ဒေသ ၂၇ ခုတွင် cloud computing ၀ န်ဆောင်မှုများ ပေးခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ် တည်း ကပင် အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ် ပို င်၊ တောင်ကိုရီးယား ၊ ထိုင်း နှင့် ဂျာမနီ တို့တွင် ဒေတာ စင်တာ အသစ်များ ထပ်မံ ထည့်သွင်းခဲ့သည်။